“Ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena dia efa manao fanadihadiana mikasika ny tompon’andraikitry ny pejy sandoka mitondra ny anaran’ny « Forces Armées Malagasy », hoy ny fampitam-baovao ofisialy. Nanamafy ny loharanom-baovao fa hisorohana ny fampitam-baovao tsy ofisialy sy tsy marina, ampahafantarina ny rehetra fa tsy pejy ofisialy ary tsy ara-dalàna ny pejy mitondra ny anarana « Tafika Malagasy » sy ny fampiasana ny sary famantarana izay tsy nahazoana fahazoan-dalana avy amin’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena sy ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika Malagasy. Arak’izany, ny pejy Facebook ofisialin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena dia «Fiarovam Pirenena » ny F sy P dia renin-tsoratra ary tsy misy tsipi-panohizana. Io no sehatra hifanakalozana vaovao sy hifaneraserana amin’ireo mpanara-baovao amin’ny tambajotram-piarahamonina. Ary izany pejy izany dia miaraka amin’ny sary famantarana misy ny minisitera. Tsy misy pejy hafa ara-dalàna ankoatra an’io pejy io ka entanina ny besinimaro mpanara-baovao mba ho mailo.